K: Blog, Blogger, Blogging
ဘလော့တခုလုပ်ရတာမခက်ပေမဲ့..ဂူးဂဲကပေးတဲ့ ready made template ကြီးတွေနဲ့တော့လဲ မနေချင်ပါ..အရေးကြီးဆုံးကမြန်မာလိုရေးလို့ရအောင် အရင်လုပ်ရတာပဲ..
အဲဒီအတွက်..ကိုမောင်လှရဲ့ ဘလော့ကို ..အားကိုးခဲ့ရတယ်..ဟောဒီမှာ...
ကိုယ်ကလဲ..html တို့ css တို့ဆိုတာသိခဲ့သင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမဟုတ်တော့...စမ်းတ၀ါးဝါးပေါ့...
အနီးအနားမှာလဲ..မေးစရာစမ်းစရာမရှိ...နောက်ဆုံးတော့..ဟိုလျှေက်သွား ဒီလျှောက်သွား ..ဟိုကလိ..ဒီကလိနဲ့ပဲ..ဘလော့တခုဖြစ်လာခဲ့တယ်.
ဒါတောင်..banner heading လေးတခုစိတ်ကြိုက်ရဖို့ ဓါတ်ပုံပေါင်းတရာကျော်လောက်ရိုက်
banner မရှိတဲ့ဘလော့တခုက..သနပ်ခါးမလိမ်းဘဲ အပြင်ထွက်တဲ့..မိန်းမနဲ့တူတယ်တဲ့လေ
တကယ်တော့..ဘလော့ဆိုတာ..အပျော်တမ်း website လေးတွေပါပဲ.. Web Log ကနေ Blog ဆိုပီး..အခေါ်အဝေါ်အသစ်ဖြစ်သွားတာပါ..တခုပဲ.. website တွေက..
static ဖြစ်ပီး..ဘလော့တွေက dynamic ဖြစ်တယ်...ဥပမာ..company တခုရဲ့ website ထဲကို
၀င်ကြည့်တာက..အဲဒီ company အဆောက်အဦထဲကို ၀င်ဝင်ချင်း..ဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိ information counter မှာပဲသွားမေးရရင် ကောင်းမလားမသိ ဖြစ်နေတာနဲ့တူပီး ဘလော့တခုကတော့ company ရဲ့ notice board မှာသွားပီး memo တွေ ..ကြေငြာချက်တွေသွားဖတ် တာနဲ့တူမှာပေါ့နော်....
အခုဆို..ကြီးကြီးမားမားလုပ်ငန်းကြီးတွေတောင်.. website အပြင် ဘလော့တွေထောင်ကုန်ကြပီ..
တချိူ့လည်း..ကြာလာတော့..ငြီးငွေ့ပီး..(ရေးစရာလဲမရှိတော့ပဲ) ဘလော့လောက ကနေ အနားယူသွားကြတာတွေလဲ..တွေ့ပါ့..( ကိုယ်ကတော့..ခုမှအရှိန်ကောင်းတုံး..)
အရေးကြီးတာက...ဟောဒီ..ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံရိပ်ယောင် ကမ္ဘာ ကြီးထဲမှာ..ပုံရိပ်စစ်တွေ..
Whatever u do, u haveaphilosophy andabelief that make u who u are. I respect u.
ဟုတ်တယ် ကွန်ပြူတာပိတ်ပြီးပြန်အိပ်ဦးမှ မနေ့ညက မနက်သုံးနာရီမှာ အိပ် အခုထပြီးစဖတ်မိပြန်ပြီ :P